प्रदेश सरकारले रुकुमपूर्वमा ८० आरडिटी किट पठायो « Lokpath
२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार १७:२५
प्रदेश सरकारले रुकुमपूर्वमा ८० आरडिटी किट पठायो
प्रकाशित मिति : २०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार १७:२५
काठमाडौं । प्रदेश नं ५ सरकारले यहाँका लागि ८० किटसहित थप स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई विनापरीक्षण घर पठाइरहेका अवस्थामा सरकारले किटसहित थप स्वास्थ्य सामग्री पठाएको हो ।
कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि अत्यावश्यक मानिने आरडिटी किटसहित २० थान पिपिई र पाँच सय थान सर्जिकल मास्क आएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख यादवप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार ती सामग्रीमध्ये पाँच थान पिपिई र दुई सय थान सर्जिकल मास्क जिल्ला अस्पतालमा पठाइएको छ ।
अन्य स्वास्थ्य सामग्री भने स्वास्थ्य कार्यालयमै राखिएको छ । पर्सालगायत जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको आरडिटी गरिने शर्माले बताए । जिल्लामा एक साताअघि पर्साबाट आएकाहरु क्वारेन्टाइनमा छन् । ती सामाग्री प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आपूर्ति विभागले पठाएको हो । अहिले प्रदेश सरकारले जिल्लामा किट वितरण गर्दै आएको प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले बताए ।
काठमाडौं – जाडोमा कसरी नुहाउने ? यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो ।
जाडोमा शरीरका हाड जोर्नी दुख्ने समस्या छ ? चिकित्सकको सुझाव हेर्नुहोस्
काठमाडौं – जाडो मौसममा धेरैलाई समस्या हुन्छ – जोर्नी दुख्ने समस्या र बाथ
जाडोमा दोहोरीरहन्छ-निमोनिया, रुघाखोकी र टन्सिल, शुरुबाटै रहनुस् सतर्क !
काठमाडौं – जाडो शुरु भइसकेको छ । यसपटक अघिल्ला वर्षजस्तै चिसोबाट जोगिएर मात्रै हुँदैन
जाडोयाममा अत्याधिक सोधिने दुई प्रश्न : हातगोडा सुनिन्छ, कसरी बचाउने छालाको सौन्दर्य ?
काठमाडौं – जाडो ह्वात्तै बढेको छ । तुलनात्मक रुपमा यो मौसममा छालाको विशेष
अनौठो रोग : खानेकुराको ठाउँमा खान्थिन् कपाल !
अनौठो मन्दिर जहाँको हावा, माटो र पानीबाट ठीक हुन्छ अनौठो…